Huawei P40 Pro na P40 +, Huawei ọhụrụ elu-ọgwụgwụ [kpọmkwem] | Akụkọ akụrụngwa
Huawei P40 Pro na P40 +, Huawei ọhụrụ elu-ọgwụgwụ [direct]
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbaso ihe ngosi nke Huawei P40 Pro ọhụrụ na anyị ga-ebi, naanị ị ga-emeghe anya gị ma anyị ga-agwa gị ihe niile ngwaahịa ọhụrụ ndị a sitere na ụlọ ọrụ Eshia na-eweta taa. Dị ka ọ na-adịkarị na ụlọ ọrụ ahụ, na usoro P40 anyị ga-achọpụta ọganihu ọhụrụ na igwefoto na ike nke ọnụ nke a ga-etinye n'ọnọdụ kachasị ọkwa niile. Nke a bụ Huawei P40 Pro ọhụrụ na P40 Pro +, ọnụahịa ya, atụmatụ ya na ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ndị ọnụ.
1 Igwe ese foto dị ka ndị na-akwado ya
5 Esemokwu dị n'etiti P40, P40 Pro na P40 Pro +
Igwe ese foto dị ka ndị na-akwado ya
Anyị ga-achọta modulu igwefoto dị iche iche dị iche iche dabere na mbipụta nke Huawei P40 anyị nwetara:
Q40: RYYB 50MP sensor, f / 1.9 - UGA 16MP f / 2.2 - Telephoto na mbugharị 3x
P40 Pro: RYYB 50MP sensor, f / 1.9 - UGA 40MP f / 1.8 - 8MP telephoto na 5x mbugharị na ToF
P40 Pro +: Ogbogu Okonji RYYB 50MP sensor, f / 1.9 - UGA 40MP f / 1.8 - 8MP telephoto na 3x mbugharị, 10x telephoto na ToF
Anyị na-amalite site na ntakịrị ntakịrị ezinụlọ P40, ngwaahịa a na-enye anyị nhazi Kirin 990 na Mali-G76 GPU nke ike gosipụtara. O juru anyị anya na ha họọrọ 8GB nke Ram, e, anyị nwere ụfọdụ mmesapụ aka 128GB nke nchekwa na ụdị ntinye. Anyị gosipụtara igwe foto ndị ahụ e kwuru n'elu: Sensọ (RYYB) 50 MP (1 / 1,28 ″) f / 1.9 - Ultra wide angle 16 MP f / 2.2, 17 mm - Telephoto 8 MP (RYYB) f / 2.4 (3x mbugharị) na OIS + AIS.
Maka igwefoto n'ihu anyị nwere ihe mmetụta IR na 32MP nke ahụ ga-enye nkọwa dị oke mma na ogo onyonyo. Banyere batrị ahụ, anyị ga-ahụ 3.800 mAh, na-agba ọsọ ngwa ngwa karịa 40W nkọwa nke Huawei na nkọwa ndị ọzọ dịka onye na-agụ akara mkpịsị aka na ihuenyo ahụ, soro, dị ka anyị kwurula na mbụ, site na nyocha ihu ya.
Banyere ihuenyo, anyị ga-anụ ụtọ otu panel 6,1 OLED na mkpebi FullHD + ebe anyị ga-ahụ nkwụghachi ume nke 60Hz, ihe nke juru anyị anya n'ịtụle usoro ndị ugbu a nke ahịa na-ewere na nke a. Anyị na-aga n'ihu na nguzogide IP53, ntakịrị nkwụsi ike na uzuzu na splashes ma e jiri ya tụnyere ụmụnne ya ndị nke okenye na-egosi IP68. Ọtụtụ oké ọchịchọ na ngwaọrụ a na eA ga-ere ya na Eprel 7 nke na-esote maka euro 799 dabere na ebe ahọpụtara ire ere.
Na larịị ọrụ aka anyị hụrụ ọdịiche ole na ole n'etiti P40 Pro na P40, mana anyị ga-eleba anya na nkọwapụta aghụghọ. Nke mbụ bụ na ihuenyo ka ukwuu, ọ na-etolite na 6,58 ″ nke panel OLED ya na mkpebi FullHD +, ma na nke ugbu a anyị hụrụ a 90Hz nweta ume nke ahụ ga-atọ ndị ọrụ ụtọ na-enweghị obi abụọ. Anyị na-emeghachi ya Kirin 990 na Mali-G76 GPU nwere 8GB RAM nke dabara dabara n’ụzọ atọ niile. Ebe anyị na-etolite dịkwa na ebe nchekwa ebe anyị na-aga 256GB nke ntinye ntinye, nke adịghị njọ maka onye ọrụ ahụ.
Igwefoto ahụ na-enwe ọganihu karịa otu ihe mmetụta: RYYB sensor 50 MP, f / 1.9, (1 / 1,28 ″) - Ultra wide angle 40 MP, f / 1.8 - Telephoto 8 MP (RYYB) 5x optical zoom - Omimi na OIS + AIS. Maka ndu anyị nwere 32MP n'okpuru otu ọnọdụ, yana ihe mmetụta IR maka nyocha ihu nke ga-eme ka nchekwa nke ngwaọrụ ahụ dịkwuo elu. Nke a ga-esonyere ya na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na ihuenyo nke ụlọ ọrụ Asia nọ na-arị elu ruo ogologo oge na nke rụpụtara ezigbo nsonaazụ dị otú a. Na ọkwa nke nguzogide anyị na-aga n'ihu na IP68 megide mmiri na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Anyị nwere batrị 4.200 mAh nke Huawei kwadoro nke ọma ka anyị wee nwee ike inweta ọtụtụ n’ime ya. Banyere Njikọta, ọ ga-ahụ kwuru na anyị nwere WiFi 6 Plus, NFC, Bluetooth, GPS, DualSIM na nke kachasị dị egwu, njikọta 5G na ngwaọrụ niile. O doro anya na Huawei nabatara teknụzụ nkwukọrịta na ọ na-asụ ụzọ n'ọtụtụ akụkụ. Anyị enweghị ọnụahịa gọọmentị ma ọ bụ ụbọchị ịhapụ ma, ihe anyị nwere bụ ohere ịhọrọ n'etiti agba anọ: Grey, Breathing White, Black na Gold, yana okecha seramiiki nke ga-abụ naanị maka ụdị kachasị elu nke oke ahụ.
Ugbu a, anyị na-agakarị ọdụ kacha "elu" ma kara aka ịbụ onye ndu ahịa na ama smart ekwentị. Isi ihe dị iche bụ na oge a anyị nwere 12 GB ebe nchekwa Ram, ee, anyị na-ekpeghachi ya Kirin 990 na Mali-G76 GPU site na ụdị ndị gara aga. Banyere ngụkọta nchekwa, anyị na-na-emechi na 256GB na mmụba nke nchekwa nke ụlọ ọrụ Asia nwere. Ole na ole ndị ọzọ, na na okwu nke batrị anyị nwere 4.200 mAh na ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ otu karịa nwanne ya nwoke "nke nta".
Igwefoto bụ isi ihe dị iche: RYYB 50 MP sensor, f / 1.9 (1 / 1,28 ″) - Ultra wide angle 40 MP, f / 1.8 - 8 MP telephoto (RYYB) 3x optical zoom - 8 MP telephoto 10x optical zoom - Omimi na OIS + AIS. Nke a kwere anyị nkwa ngwakọ ngwakọ nke ruru 100x nke na-enye nsonaazụ izizi nke mbụ karịa ndị asọmpi ahụ nyere. Na igwefoto n'ihu anyị na-emegharị 32MP na ihe mmetụta ihu ihu nke ga-eso ihe mmetụta ihe ntanetị aka na ihuenyo, yabụ na anyị enweghị ọtụtụ akụkọ na nke a. O juru anyị anya na ihuenyo ahụ yiri nke nke Huawei P40 Pro na usoro ọnụọgụ ya na panel ya 6,58 ″ OLED na mkpebi FullHD + na ọnụọgụ ume 90Hz.
Esemokwu dị n'etiti P40, P40 Pro na P40 Pro +
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Huawei P40 Pro na P40 +, Huawei ọhụrụ elu-ọgwụgwụ [direct]
Nkọwa n'etiti Huawei P40 na Samsung Galaxy S20
Ngwa zigara ndị nkụzi gị ọrụ site na iji Notebloc